यी ५ संकेत शरीरले दिन्छ ब्लड क्यान्सर हुनुअघि, नगर्नुहोस् वेवास्ता
कुनै पनि समस्या हुनुअघि हाम्रो शरीरले विभिन्न संकेत प्रदान गर्छ। तर हामीले त्यस्ता लक्षणलाई वेवास्ता गर्न हुँदैन्।त्यसै क्रममा ब्लड क्यान्सर हुनुअघि शरीरले पूर्व संकेत दिने गर्छ।
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। कुनै पनि समस्या हुनुअघि हाम्रो शरीरले विभिन्न संकेत प्रदान गर्छ। तर हामीले त्यस्ता लक्षणलाई वेवास्ता गर्न हुँदैन्।त्यसै क्रममा ब्लड क्यान्सर हुनुअघि शरीरले पूर्व संकेत दिने गर्छ। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
श्वासप्रश्वासमा समस्याकेही प्रकारका ल्यूकेमियाले रातो रक्त कोशिकाको उत्पादनमा बाधा पुर्याउने गर्छन्। यो कोशिकाले शरीरमा सबै कोशिकासम्म रगत पुर्याउने काम गर्छ।
जब रातो रक्त कोशिकामा कमी हुन थाल्छ। तब श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन शुरु हुन्छ। यद्यपी श्वास प्रश्वासको समस्या फोक्सोको क्यान्सरको लक्षण पनि हुनसक्छ।
शरीरमा यी १० लक्षण देखियो ? तुरुन्त अस्पताल जानुस् क्यान्सर हुनसक्छ !
चाहे तपाइँ धनी हुनुहोस् या गरिव क्यान्सरले ज्यान लिन्छ नै । हुने खाने होस वा हुँदा खाने क्यान्सरले कसैलाइ छोड्दैन ।
तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् ।
– निरन्तर खोकी- फोक्सोको क्यान्सर
फोक्सोको क्यान्सर धेरै नै नफैलिएसम्म अधिकाँश मानिसले चाल पाउँदैनन् । कतिपय मानिसमा भने फोक्सोको क्यान्सरका लक्षण शुरुमै देखिन्छन् । फोक्सोको क्यान्सरका मुख्य लक्षण मध्ये निरन्तर खोकी लाग्नु पनि एक हो । खोकी लाग्ने र त्यससँगै छाती दुख्ने हुन थाल्यो भने होसियार हुनुस् । लामो श्वास लिँदा वा हाँस्दा समेत छाति दुख्नु खतरनाक लक्षण हो ।
– शरीरमा भएका मुसाको रंगमा परिवर्तन- स्किन क्यान्सर
– दिसामा रगत, दृखाइ- आन्द्राको क्यान्सर
दिशामा रगत देखिने र दिसा लाग्ने समय परिवर्तन भएको भयै हुनु पनि राम्रो संकेत होइन । यसले पनि तपाइँको सानो आन्द्रामा क्यान्सर भएको संकेत गर्छ । दिशा गर्दा दुख्ने वा रगत देखिनु निकै घातक मानिन्छ । यस्तो समस्या अधिकाँशलाई ६० वर्षको उमेरपछि मात्र देखिन्छ ।
– मुख भित्र सन्चो नहुने घाउ- धेरै प्रकारका क्यान्सर
– निल्न समस्या- खाना नलिको क्यान्सर
– रहस्यमयरुपमा वजन घट्नुः धेरै प्रकारका क्यान्सर
अधिकाँश क्यान्सरको साझा लक्षण मानिन्छ वजन घट्नु । यदि तपाइँको शरीरमा रहस्यमयरुपमा वजन घटिरहेको छ भने यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ ।
– पिसावमा रगत- प्रोष्टेट क्यान्सर
पिसाव गर्दा अनपेक्षितरुपमा पोल्ने र थोरै थोरै पिसाव आइरहने जस्ता लक्षण तपाइँलाई प्रोष्टेटमा समस्याका संकेत हुन सक्छन् । पिसाव गर्दा रगत देखिनु दुखाइ हुनु पनि यस्तो लक्षण हुन सक्छ ।
– अनावश्यक टुडुल्को उठ्नु
– रहस्यमय दुखाइ- धेरै प्रकारका क्यान्सर
शरीरमा असामान्य अवस्था आउँदा दुखाइ हुनु सामान्य विषय हो । तर शरीरको कुनै पनि भागमा विनाकारण दुखाइ महसुस हुन थाल्यो भने होस् गर्नुस् यो क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । ब्रेन ट्युमर हुनेलाई टाउको दुख्ने, कोलोन क्यान्सर हुनेलाई ढाड दुख्ने र पा-ठेघर वा गु-दद्वा-रको क्यान्सर हुनेलाई पनि पछाडीको भागमा दुखाइ हुन सक्छ ।
– दिसा/पिसावमा रगत- गु-दद्वार क्यान्सर
दिशा वा पिसावमा रगत देखिनु खतरनाक हो । खासगरी दिशामा रगत देखियो भने यसले तपाइँको ठूलो आन्द्राको अन्तिम भाग वा गु-दद्वारमा क्यान्सर भएको हुन सक्ने संकेत दिन्छ । पिसावमा रगत देखियो भने चाँहि प्रोष्टेट क्यान्सरको लक्षण पनि हुन सक्छ ।
क्यान्सर हुनुभन्दा अघि शरीरले दिन्छ यस्ता संकेत
पिसाबमा समस्या –
अण्डकोषमा परिवर्तन –
पिसाबमा रगत देखिनु –
दिसामा रगत देखिनु –
छालामा परिवर्तन –
लिम्फ ग्रन्थिमा परिवर्तन –
निल्न गाह्रो हुनु –
मुटु पोल्नु –
वजन घट्नु –